क्यामेरा सुरक्षाकर्मीले नै फुटाएको हो त ? प्रहरी दाई उजुरीको सुनुवाई कहिले हुन्छ ?
तारकेश्वर गाउँपालिकामा असार १० गते पत्रकारमाथि दुब्र्यबहार गर्दै क्यामेरा तोडफोड गर्ने वडाअध्यक्षहरुले अहिलेसम्म क्षतिपुर्ती प्रदान गर्ने र घटनाको जिम्मा लिएका छैनन् ।
क्षतिभएको क्यामेराको मुल्य र घटनाको जिम्मेवारी लिएर माफी माग्नु पर्ने भन्दै पत्रकार सुजित भण्डारीले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराउनुभएको छ । नौं दिन अघि भएको घटनाको अहिलेसम्म उनीहरुले जिम्मेवारी लिएको छैन । तीनै जना वडा अध्यक्षहरुले ११ गते विज्ञप्ती जारी गरेर प्रहरीको हातबाट क्यामेरा फुटेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए ।
वडा अध्यक्षहरुको सामुहिक बिज्ञप्ति ः जसमा क्यामरा तोडफोडको आरोप सुरक्षाकर्मीलाई लगाईएको छ ।
घटना भएको नौं दिनसम्म क्यामेरा फिर्ता भएको छैन । साथै उक्त क्षतिग्रस्त क्यामेराको अवस्थाको बारेमा समेत पत्रकार भण्डारी र सम्वन्धित सञ्चार गृहलाई गाउँपालिका तथा वडाअध्यक्षहरुले जानकारी दिएको छैन ।
त्रिशुली टिभका समाचार प्रमुख सुजित भण्डारी सहित त्रिशुली खबर साप्ताहिकका सम्पादक नवदीप श्रेष्ठ र मिक्स एफएमका प्रमुख विष्णुप्रसाद अधिकारीमाथि समेत उनीहरुले दुब्र्यबहार गरेका थिए ।
पत्रकार भण्डारी चढेर गएको मोटरसाइकल चौथो दिनमा मात्रै विदुर आइपुगेको थियो । १० गते राती आफ्नो सवारी साधन छाडेर प्रहरीको सवारी साधनमा पत्रकार भण्डारी फर्कनु परेको थियो । चार दिनमा गाउँपालिकाले पत्रकारको मोटरसाइकल विदुर ल्याइदिएको थियो । क्षतिभएको क्यामेराको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात रहेको छ ।